Tomatom-bozaka maitso miaraka amin'ny tongolo lay armeniana amin'ny ririnina: dingana isan-karazany - Zavamaniry mihinana - 2019
Tomatano maitso Armeniana: Recipe with Photos
Ny tsindrin-tsakafo Armeniana dia iray amin'ireo sakafo matsiro indrindra manerantany. Ary ny fitaovana fanomanana ny fiarovana ny fiarovana dia manantitrantitra ny fahamarinan'izany zava-misy izany. Tomatôma armenianina no sakafo mahavoky azy. Ny asongadin'ity fitehirizana ity dia voatabia maitso, voaangona avy amin'ny fandriana amin'ny endrika tsy mety.
Ahoana ary aiza no mitahiry ny fitaovana
Network User Recipes
Fanomanana bota sy lamba
Mba hanomanana ity lovia ity dia mila jiro sy lamba ianao. Ny habetsaky ny container dia miankina amin'ny safidinao, afaka mampiasa boaty hatramin'ny 3 litatra.
Fantatrao ve? Ny climat tomato lehibe indrindra dia nihoatra ny 9 kilao. Natsangan'ny mpamboly britanika iray antsoina hoe Bokuok izy.
Mariho fa Fa ity recipe ity dia tsy ilaina ny manala ny siny mialoha, satria ity dingana ity dia hotanterahina rehefa vita. Fa raha ny lafaoro, dia tokony hosasana amin'ny rano mangotra mandritra ny 5-10 minitra izy ireo, ary avy eo dia azo ampiasaina amin'ny tanjona tiany hatao.
Mety ho liana ianao hianatra ny fomba handrahoana voatabia maitso amin'ny teny géorgien.
Mba hahafahana mandamina fihetsika mahomby dia mila fitaovana an-dakozia manaraka ianao:
panamboarana siramamy amin'ny afo;
mofomamy hena na fitaovana hafa mba hikapoka tongolo gasy, zavamaniry ary sakafo.
Fantaro ny momba ny fanamainana ny bakteria ao an-trano.
Mba hanomanana tsiambaratelo, dia mila ireto fitaovana manaraka ireto ianao:
voatabia maitso - 1 kg;
voankazo - 60 g;
cilantro sy dill - 1 ny sakamandimby tsirairay.
Zava-dehibe izany! Ny fisian'ny voatabia maitso ao anaty lovia dia afaka manome tsiro mangidy, saingy ny fanesorana azy dia tsotra. Mba hanaovana izany, mandra-pihinana, alao ny legioma amin'ny rano mangatsiaka mandritra ny adiny iray.
Ny endriky ny siramamy:
rano - 800 ml;
vinaingitra 9% -70 ml;
sira - 1 tbsp. sotro (tsiro).
Ho an'ny fanomanana ireo sakafo voatoto ireo dia mila:
Mitefika tsara na mikarokarena amin'ny menaka fisaka sy tongolo lay. Ny greens dia tokony hatsofoka amin'ny antsy, ary voatabia - kapao amin'ny antsasany na efitrano, araka ny fahamendrehanao.
Apetraho ao anaty vilia ny entana rehetra ary manaparitaka ny voka-bary aterak'izany.
Amboary ny jirofo. Mba hanaovana izany, fanangonana rano, vinaingitra, sira. Ankoatr'izay, azonao atao ny manampy tsiranoka marevaka, voan-kesandevin'ny ravina. Ireo fanatanjahan-tena ireo dia manan-danja ary mivantana any amin'ny banky miaraka amin'ny fihantsiana.
Apetaho eo ambony afo ny fitoeran-javatra ary arotsaho amin'ny siramamy ilay izy, azonao atao anaty tavoahangy miaraka amin'ny voatabia. Ilaina ny famenoana hatramin'ny 0,5 cm eo ambanin'ny tendany.
Aforeto amin'ny siny ny tavoahangy ary afatory amin'ny rano fandroana. Tokony hatao izany amin'ny rano mangatsiaka amin'ny fofona ambany ho an'ny 10-15 minitra.
Alao ny biriky, amin'ny farany ny bosoa ary atsipazo amin'ny tendany. Ao anatin'izany toe-javatra izany, tokony hihena tanteraka izy ireo, ary avy eo dia ho vonona izy ireo hampiasaina.
Mba hiarovana voatabia maitso ho an'ny ririnina, dia manoro anareo ny hianatra ny fomba hanamboarana azy ao anaty barika, hanangona azy ireo amin'ny fomba mangatsiaka, ary manamboatra tongolo lay miaraka amin'ny dill.
Azonao atao foana ny manamboatra ny fanomanana an'ity sakafo ity, arakaraka ny safidinao. Noho izany, manandrana amin'ny fampisehoana zava-manitra, azonao atao ny mifidy ny singa tsara indrindra izay hanome tsiram-peo tsy manam-paharoa.
Aorian'ny fialambolin'ny kofehy, dia azo tanterahina ao anaty lakozia, vata fampangatsiahana na balcony mandritra ny fotoana maharitra. Ny toerana fitehirizana dia tokony ho maizina, maina ary mangatsiatsiaka. Tsy voatery hifikitra amin'ny fepetra hentitra loatra ny mari-pana, fa ny efitra kosa dia tokony ho 0 hatramin'ny 18 degre.
Zava-dehibe izany! Raha manomboka mampitombo ny rahona sy ny fofona manjavozavo ny zezika nandritra ny fitahirizana, dia tokony hesorinao avy hatrany ilay siny miaraka amin'ny votoaty toy izany.
Taratasy armenianina no mampiavaka azy, satria manana tsiro mahasalama izy ireo ary mety tsara ho an'ny sakafo fialantsasatra. Ny sakafo toy izany dia afaka manova ny fety rehetra.
Izany no mahatonga ny sipako vavy mahavita voatavo maitso, manandrana - matsiro be !!!
Famokarana: amin'ny rano 1 litatra. siramamy ary 1 tbsp. Ny salohim-bary tsirairay avy amin'ny 1.st.l. vinegar, 2 tbsp. vodka. Hetezo voatabia maitso miaraka amin'ny lakroa eo amin'ny tavy, ampidiro tongolo gilao kely ao anaty tsoka ary apetraho ao anaty siny. Fenoy rano mangatsiaka raha vao mihamafana ny rano. Mofomamy amin'ny siramamy vita amin'ny siramamy ary atsipazo azy ireo voatabia. Vodka mandatsaka mivantana ao anaty siny. Roll up
Fomba fikarakarana tsaramaso Kaviar avy amin'ny voatabia maitso: Manapaka voatabia maitso ho voatango, tongolo ho vinaingitra, manapaka karaoty mangatsiatsiaka, manapaka tsaram-bary mamy, manapaka ny katsaka solomaso ao anaty sombin-tsakafo na matevina. Sakafo legioma, afindrano ny kofehy ary ento ao anaty efitrano mahafinaritra, manodidina ny 10-12 ora.
Sola, ampio siramamy amin'ny masomboly, mainty fotsy, akorandriaka, jirofo ary menaka misy menaka.
Arotsaho miaraka amin'ny rindrina mandritra ny adiny iray eo ho eo. Miainga avy hatrany amin'ny siny ary manalalaka azy.
Ny vokatra ilaina ho an'ny fanangom-pokokarana "Caviar avy amin'ny voatabia maitso": voatabia maitso - 4 kilao ny tongolo - karazana 1 kilao - 1 kilao mamy mofomamy - 0.5 kilao masomboly voanjobato - voankazo 300 grama - gera 1 kaopy - jaridaina - 10 siramamy 4.gif menaka - 300-400 grama
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Tomatano maitso Armeniana: Recipe with Photos